PTFE Rod Ram onye na-emepụta PFLB20
PTFE Rod Ram onye na-emepụta PFB80
PTFE Rod Ram onye na-emepụta PFB150
PTFE Rod Ram onye na-emepụta PFB20, 20.
PTFE Tapawa extruder
Echichila na ntinye ọrụ nke ọrụ Korea ka emechara nke ọma, a na-etinyekwa ahịrị niile nke mado extruder!
Ọdịnaya: Ugbu a, ụlọ ọrụ anyị arụchaala ọrụ nke ịkwa akwa extruder arụmọrụ igwe dị ka mkpa ndị ahịa Korea si dị. Ugbu a tinye ...
Gịnị bụ ihe dị iche Polypropylene na Polymer PTFE / FEP machining?
PTFE, nke a maara dika plastik. Polytetrafluoroethylene (PTFE) bụ ihe fluoropolymer sịntetik nke tetrafluoroethylene nke nwere ọtụtụ ihe eji eme ihe maka ngwa dị iche iche dị ka iji dị ka PTFE Tape. PTFE bụ fluorocarbon siri ike, ebe ọ bụ nnukwu ngwakọta ngwongwo na-agụnye carbon na fl ...
PTFE na PFA
PFA, ma ọ bụ Perfluoroalkoxy, bụ ụdị fluoropolymer. O nwere ezigbo ihe yiri ya dika polytetrafluoroethylene (PTFE), nke bu uzo amara nke polymer. PFA tụụrụ ime site na DuPont Co. wee nye ya aha njirimara polymer PFA. Kedu ihe dị iche na resi ...
Thekpụzi usoro nke akuko akpaka Nkedo igwe
Bụ kpụrụ plastic nhazi na ịkpụzi ngwa na obodo otu n'ime ndị kasị ochie technology. Ọ nwere teknụzụ na-emepụta ihe tozuru oke, akụrụngwa na ebu dị mfe, ọ dị mfe ịme ngwaahịa buru ibu, nwere ike iji ọtụtụ ụdị iji melite mmepụta nke obere akụkụ, wdg, na igwe, igwe elektrọnik, ...
Onye ahịa Singapore a azụrụla otu ngwa ọrụ Polymer Ptfe rod extruder igwe site na ụlọ ọrụ anyị. Mgbe obere oge ojiji, ndị ahịa na-enye ezigbo evaluation.As ahịa na-abawanye na ahịa, ndị ahịa nwere ọhụrụ zuo maka ebu. T ...
PTFE etere Mere na Polymer Fluoropolymers Part 1
Ihe ngbanye akara bụ ihe nkiri polytetrafluoroethylene (PTFE) maka iji akara eriri ọkpọ. A na-ere teepu ahụ ka ọ gbue obosara ma merụọ ya na spool, na-eme ka ọ dị mfe ikuku gburugburu eriri ọkpọkọ. “Abụba” PTFE Mepe mere na fluoropolymer “abụba” PTFE mere fluoropo ...
123456 Osote> >> Peeji nke 1/82